မျက်​နှာဖုံး၂​ရောင်​စပ်​ Coupleအသား​ကောင်းလေးပါ အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
Medium တောင် lb-140 တော်လို့ plus size okay တယ် နော့်​
? Size : l ,Xl ( 145lbထိရတယ်​​နော်​ )
? Color : ( Picture as Color )
❤ Instock မို့ မှာပြီး ၂ရက်​အတွင်း ပို့ပေးပါတယ်​​ရှင်. ❤
vb no -09776171927
အမည်: မျက်​နှာဖုံး၂​ရောင်​စပ်​ Coupleအသား​ကောင်းလေးပါ